Soosaaraha Mashiinka Burushka Shiinaha | Qalabka Burushka MeiXin
Waan kuu adeegaynaa
Waad nagu kalsoon tahay, warshadaha mashiinka cadayga ee Meixin.
Hadafkayagu waa inaanu ku qancinno macaamiisheenna tayo sare leh oo tayo leh oo la isku halleyn karo si loo hubiyo in macaamil kastaa uu dareemi karo degganaan iyo kalsooni ku aaddan alaabteenna markay tahay dalabyadooda. Alaabadayada si balaadhan ayay uga helaan codsiyadooda suuqa sababtoo ah guryaha wanaagsan. Waxay leeyihiin astaamo badan oo damaanad qaadida baahin iyo codsi.
Fududaynta FMX waxay u oggolaaneysaa isbeddel dhakhso leh soosaarka burushka cusub.
Iyada oo ay jirto hal madax oo ruxaya, oo madax-bannaan 4 taako ah, oo loo isticmaalay burushka wareega musqusha yar, kuwa kale.
Dhar xidhasho Iyadoo leh hal madax oo ruxaya, madaxbanaani ujeedoodu yahay 2 xiniinyaha wareega ah, waxay u adeegsan jirtay Makiinadaha cadayga ee KELIYA.
Tayada ugu fiican 5 axis 3 madaxa 2 qoditaanka iyo mashiinka burushka 1-aad ee burushka musqusha.
Adeegga u-habeynta loogu talagalay shuruudaha ganacsiga gaarka ah ama loolanka adag leh.
Waxaan u tixgalin doonnaa sida loo soo bandhigo saamiga macmiilahayaga si aan u qaabeyno mashiinka .we waxaan sameyn laheyn cabirno balaaran oo kaladuwan. Cabbirka balaastigga caadiga ah: 400 * 60mm. Haddii aad rabto inaad sameyso cabir weyn ama xoogaa timir ah oo gaar ah, waxaan jeclaan lahayn inaanu ka dhigno.
Gaar ahaan, for burush roller
& mashiinka cadayga nooca, burushka noocan oo kale ah ayaa badanaa loo adeegsadaa warshadaha loogu talagalay mashiinada farqiga farqiga u dhexeeya. taasi waa mid ka mid ah sababaha ay ugu baahan tahay in lagu habeeyo.
1. Baadhitaan: Macaamiilku waxay sheegaan shuruudaha la doonayo iyo u hoggaansanaanta.
2. Naqshadeynta: Kooxda naqshadeynta ayaa ku lug leh bilowga mashruuc si loo hubiyo badeecada loogu talagalay in loogu talagalay inay ku habboon tahay macaamiisha.
3. Maareynta Tayada: Si loo bixiyo alaab tayo sare leh, waxaan sii wadnaa wax ku ool ahNidaamka Maareynta Tayada oo hufan.
4. Soosaarka Mass: Marka la soo saaro noocyada taranka qaabaynta qaab dhismeedka, shaqada, iyo baahida, soosaarka ayaa ah marxaladda xigta.
5. Waxaan u diyaarin karnaa garsooraha amarada - ha noqotee adeegyadeena ku meel gaarka ah, alaab-qeybiyeyaal kale ama labadaba.
Waxaan si buuxda ugu qanacsan nahay wax soo saarka adduunka ee macaamiisheena. Laakiin kuma lihin uun sifooyinka gaarka ah ee qaybta; Waxaan sidoo kale si qoto dheer uga faalloonaa su’aalaha sida: “Maxaa ka farxiya macaamiisheenna macamiisha?” "Sideen ku kicin karnaa rabitaanka iibsadaha macaamiisha dhamaadka?" Tani waa waxa aan adiga kugu sameyn doonno. Sidan ayaa ah sida aan ugu rogno mashruucaaga mashruuceena.
Mashiinka alwaaxa Flat burushka mashiinka sameeya oo ay sameysay MEIXIN wax soo saar PZ-18
Saldhig alwaax, Single Face, Marka loo eego shuruudaha macaamilka Filament banaanka godadka.
Mashiinka samaynta mashiinka mashiinka ee 'phool jhadu' - CNC noom broom MAKING MACHINE
Warshadeena JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., LIMITED oo ku takhasustay soosaarka burushka iyo burushka. Waxaan nahay soo saarista tikniyoolajiyadda sare waxaana qibrad fiican u leenahay qadkaan hore 30years. Waad gaari kartaa magacayada wax soo saarka. Sida mashiinka boodhka oo aan boodhka lahayn. Mashiinka Xayawaanka ee Xayawaanka ah ee Fikirka ah. Mashiinka Mashiinka Broom-ka Hindiya oo Automatic buuxa ah Mashiinka samaynta mashiinka mashiinka ee 'phool jhadu' - CNC noom broom MAKING MACHINE.
Mashiinka Wireedka Birta ee loo yaqaan 'Flat burush' oo ay sameysay MEIXIN soosaarida PZ-03
Fududaynta FMX waxay u oggolaaneysaa isbeddel dhakhso leh soo saarka burush cusub oo la ruxay. Qayladaan hooseysa 3 faashad cnc FAN BROOM mashiinka samaynta burushka 2 grippers.
Mashiinka ciribtirka burushka ee ay sameysay MEIXIN soosaarida PZ-02
Warshadeennu waxay ku takhasustay soo saarista 2 illaa 5 axis hal (double) mashiinka midabaynta, mashiinka qashin qubka CNC, qodista CNC iyo mashiin isku-darka, mashiinka jaridda jeexjeexa, mashiinka goynta goynta. si balaadhan ayaa looga isticmaalaa nooc kasta oo burush ah, tusaale ahaan: xaaqin (balaastiig iyo alwaax) burush nadiifinta, cadayga korantada, cadayga safarka, burush qurxinta, cadayga ciddiyaha, burushka wejiga, burush wareega, burush wareega , burush alwaax ah iyo wixii la mid ah.
Waxaan ku guuleysanay shahaadooyin badan oo alaabteena ah xagga tayada
Intii lagu gudajiray sanadihii la soo dhaafay, muhiimadeena No. 1 ayaa had iyo jeer ahayd adeega macaamiisha iyo qanacsanaanta macaamiisha. Wax badan ayaan qabanay si aan sare ugu qaadno heerarka tayada oo aan ku dadaalno sidii aan u dhisi lahayn maamul tayo leh iyo nidaam dammaanad qaad ah. Intaa waxaa sii dheer, shirkadaheena waxay gaartay soo saarista shahaadada lahaanshaha iyo shahaadada CE.